> Household wear>MAX-033 Shoe cabinet
Open doors shoe cabinet including5adjustable shelves ဖြုတ်တပ်နိုင်သော စင် (၅)စင်ပါဝင်သည့် အဖွင့်တံခါးဖိနပ်ဗီရို average capacity5pairs of shoes per shelf စင် တစ်စင်လျှင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ဖိနပ်အရံ (၅)ရံအထိ ထည့်သိမ်းနိုင်သည်။ Half height glass door cabinet with5adjustable shelves. (Suitable for shoes) loading up to 36 pair of shoes. အတွင်း၌ ဖြုတ်တပ်နိုင်သော စင် (၅)စင်ပါဝင်သည့် မှန်တံခါးဗီရိုအလတ်ဖြစ်သည်။ (ဖိနပ်များအတွက်သင့်တော်ပြီး) ဖိနပ်အရံ (၃၆)ရံအထက်ထည့်သိမ်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ Size W88 *D30 *H105 cm အတိုင်းအတာ – အလျား ၈၈၊ အနံ ၃၀၊ အမြင့် ၁၀၅ စင်တီမီတာ